नेपाल आज | के तपाईंको गालामा डिम्पल छ ! पढ्नुहोस् कतै बिरामीको लक्षण त् होइन ?
के तपाईंको गालामा डिम्पल छ ! पढ्नुहोस् कतै बिरामीको लक्षण त् होइन ?
डिम्पल पनि बिरामीको कारण हुन सक्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन होला । डिम्पल जुन हाम्रो गालामा पर्छ, यसलाई देखेर हामी एकदमै राम्रो ठान्छौँ । तर हामीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ डाक्टरहरूले यसलाई बिरामीको लक्षण पनि मान्ने गर्छन् । फेरि प्रश्न उब्जिन सक्छ, बलिउडका स्टारहरू जसको गालामा डिम्पल पर्छ, के उनीहरू पनि बिरामी हुन् त ! आउनुहोस बुझौँ, डिम्पल पर्नु कुन प्रकारको बिरामी हो ?